Kuvhara Kwemagetsi Furance ne Induction, KGPS muvira yevira
musha / KGPS Generator Series / Magetsi Anonyungudika Furance NeIncuction
Category: KGPS Generator Series Tags: Gwaro rekuisira muvira, magetsi anotsvavira vira, magetsi anoputika muvira yevira, induction furnace, kudonhedzwa kunyorera vira, indasitiri inonyungudira vira, kunyungudzwa mukati mevira
Kuvhenekesa Magetsi Motenzi neInduction
1. KANA kuvhara kwechinyoro kunoputika
2. quality induction furnace
3. high efficiencies electric furnace
4. kunyausa simbi yakasiyana-siyana
5. simba rokuponesa
Kunyorera nguva Min 20-60 20-60 30-70 30-70 30-70 30-70 40-80 50-90 50-90
1. Chizvarwa chitsva chesimba-rinoponesa mhedzisiro IF IF induction vira ine zvishoma simba yesimba, kunyungudika kwakanyanya kushanda, tembiricha yakafanana, kusanganisa kweiyoidiki yezvidiki, zviri nyore kudzora, kupisa kwekushisa kwakanaka kwakanaka uye zvichingodaro. KANA induction yevira yekudzora sisitimu uchishandisa nesilicon-inodzorwa AC-DC simba shanduko dzidziso, iyo yedhijitari isiri-relay kudzora, ine yakanyanya kuvimbika uye yakakwira kushanda frequency yeanopokana-jamming kugona ne otomatiki yekutevera, mashandiro ebasa pasina kupindira kwevanhu, otomatiki anoenderana mutoro uye simba. Iine pamusoro-pari zvino, pamusoro pemagetsi, kushaikwa chikamu, kukwana kwemvura yekudzivirira kuchengetedza kugona iyo inobvumidza zvishandiso zvekutadza chero kupi kunoitika panguva yekushanda hazvizokuvadza zvinhu, zvichideredza kushandiswa kwemidziyo uye mari yekugadzirisa. Ne kupisa kunopinda, kusungunuka, brazing, kupisa kurapwa, sintering, senge kutsigira kushandiswa kweyechete-kristaro yakadhonzwa. Inogona kuwedzera iyo tembiricha mhinduro sisitimu, kuumbwa kwetembiricha yakavharwa-loop otomatiki kugadzirisa system: wedzera tembiricha yekuparadzaniswa yakanamatira kumachini, kuti uwane chete tuma inokodzera kugadzira kwekushisa kweiyo workpiece chiteshi. Iko kuwedzerwa kwehunyanzvi hwekupindirana, bvuma iyo PLC kana iyo "murume-muchina interface", maindasitiri muchina kudzora uye kupisa sisitimu kuti uwane hutongi hwehungwaru, pamwe nehungwaru tembiricha yekudzora chishandiso kune chaiyo tembiricha kudzora kwekuitwa kwesimbi.
2. induction melting furnace ine:
3. kutsigira zvombo zvekushandisa: